रानी जमराको कृर्षी व्यवसाय अवलोकन सम्पन्न –
रानी जमराको कृर्षी व्यवसाय अवलोकन सम्पन्न
२०७८ असार १८, शुक्रबार , ०३:३८ मा प्रकाशित
टीकापुर । रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय टीकापुरले बिभिन्न कृषकहरुको व्यवसाय अवलोकन शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ ।
सो इकाईका कार्यालय प्रमुख भरत कँडेल सहितको टोलीले टीकापुर नगरपालिकाका कृषकहरुलाई दिएको अनुदान प्रभावकारीरुपमा सदुपयोग गरिएको छ या छैन भन्नेबारे अवलोकन गरेको हो ।
२०७० सालदेखि सक्रियरुपमा रहेको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित दिपज्योति महिला कृषक समुहको अवलोकन टोलीले अबलोकन ग¥यो । यो समुहले २२५ कट्ठा जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएको छ ।
आफ्नो तरकारीमा लौका, चिचिण्डा लगायत र काक्रा उत्पादन पश्चात दाङ, कोहलपुर र अत्तरियासम्म तरकारी बिक्रि गरेको यो समुहका अध्यक्ष मिना कुश्मी बताउनुहुन्छ । साथै उहाँले एक पटकमा ३५ क्विन्टल तरकारी र काक्रा बिक्रिका लागि पठाएको बताउनुभयो ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय टीकापुरले दिएको अनुदानबाट नै हामी महिला लाभान्वित भएका हौं उहाँले भन्नुभयो ।
हाम्रो महिला समुहले बार्षिक ४ लाखसम्म बचत गरेको छ भने बचत गरिएको रकमबाट १ कट्ठा ४ धुर जग्गा समेत खरिद गरेको अध्यक्ष कुश्मीले बताउनुभयो ।
यसैगरी सो अबलोकन टोलीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ का बशन्त कुमार जिसीको बाख्रा फर्म अबलोकन गरेको छ ।
बिगत २ बर्षदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएका जिसीसंग हाल ६८ वटा बाख्रा छन । ति बाख्रा मध्य उहाँको फर्ममा बोयर, जमुनापारी र लोकल बाख्रापनि छन ।
अबलोकन टोलीसंग जिसीले भन्नुभयो–‘रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय टीकापुरले दिएको अनुदानबाट आफुलाई निकै राहत भयो र बाख्रापालन पेशालाई अझ दरिलोरुपमा लैजानु पर्छ भन्ने हौसल समेत प्राप्त भयो ।
यसैगरी टीकापुर नगरपालिका वडा न.९ दुर्जनपुरका राजु चौधरीको तरकारी खेती समेत टोलीले अबलोकन गरेको छ । कृषक राजु चौधरीले दुई बिघा जग्गामा तरकारी खेती गर्नु भएको छ । तरकारीबाट मासिक ८०÷९० हजारसम्मको तरकारी बिक्रि गरेको कृषक राजु चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो–‘यो पटक भने लकडाउनले गर्दा बिगतजस्तो तरकारीमा अम्दानी भएन । कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण देश लकडाउनमा थियो । यसको नकारात्मक प्रभाव लगभग सबैमा परेको थियो ।
त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ९ बालुवाटारमा रहेको केराखेतीको समेत अबलोकन गरिएको छ । केरा कृषक हरिहर प्रसाद उपाध्यायले भन्नुभयो– मेरो पुरै घरपरिवार ‘५ कट्ठा जग्गाबाट २०७२ सालदेखि केरा खेतीमा लागेका हौं ।’ हाल ९ बिघा जग्गामा केरा खेती गरेका छौं उपाध्यायले बताउनुुभयो ।’
रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय टीकापुरले आफुलाई केरा खेती गर्न अनुदान दिँदै आएको र हाल ५ बिघा केराखेतीका लागि सिँचाई गर्न थोपा सिँचाई प्रबिधी समेत ७५ प्रतिशत छुटमा अनुदान दिएको केरा कृषक उपाध्यायले बताउनुभयो ।
यसैगरी टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित श्री उज्यालो बहुदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड लाई रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय टीकापुरले बिभिन्न अनुदान दिएको संस्थाले जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक रामकृष्ण चोधरीले अबलोकनका क्रममा रानी जमराले ४२ लाख मुल्यको कम्पाइन ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यो कम्पाइनबाट गत सिजनमा २ सय ४९ बिघा गहु काटेको व्यवस्थापक चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘ संस्थासंग आबद्ध किसानको गहुँ प्रति बिघा ४ हजार ५ सय र अन्य किसानको ५ हजार ५ सय रुपैयाँमा गहुँ कटान गरेका थियौं ।
यो सहकारीसंग आबद्ध ६२ जना कृषक बिउ उत्पादनमा सक्रिय छन भने संस्थाका सेयर सदस्य ८ सय जना रहेको समेत व्यवस्थापक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
अबलोकनका क्रममा रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कृषी कार्यक्रम इकाई कार्यालय टीकापुरका प्रमुख भरत कँडेलले कृषकहरुले कृर्षी पेशालाई दिएको निरन्तरताप्रति निकै प्रशंसा तथा सहनुभुति प्रकट गर्नुभयो ।
अबलोकनकै क्रममा कृषकहरुका बिच कँडेलले अनुदान तथा आफ्नो लगानिबाट कृषी व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहनु भएका कृषकहरुलाई थप अनुदानका लागि फेरीपनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
Prevपछाडीटीकापुर र जानकीका कृषकहरुको व्यवसाय अवस्था बारे अवलोकन
अगाडीमाओवादीले हटाएका कैलालीका ४ जनप्रतिनिधिको पद सर्वोच्चद्वारा थमौतीNext